Iindlela ezi-4 zokuCutha uMngcipheko woRhwaphilizo oluRhabaxa | Martech Zone
Intengiso yedijithali iya kuba yeyona nkcitho iphambili kwintengiso yemithombo yeendaba ngo-2016 ngokwe comScore. Ikwayenza nokuba ibe yinto ekungenakuphikiswa kuyo ekucofeni ubuqhetseba. Ngapha koko, ngokwengxelo entsha ngobuqhetseba kumzi-mveliso wentengiso kwi-Intanethi, isinye kwisithathu sayo yonke inkcitho yentengiso iya kuchithwa ngobuqhetseba.
Distil Networks kwaye i Iziko leNtengiso elisebenzayo (IAB) bakhuphe Isikhokelo soMshicileli sedijithali sokuMlinganisa kunye nokuNciphisa iTra Traffic, Ingxelo evavanya ingxaki yanamhlanje yobuqhophololo kwintengiso yedijithali.
Isitshixo Cofa ukuKhangela ubuqhetseba
I-75% yabapapashi kunye ne-59% yabathengisi abakwazi ukucacisa abantu xa kuthelekiswa nokugcwala kwabantu.
Itshitshisiwe kubahlalutyi (50%) kunye nobuqhetseba obukhokelayo kunye nobhaliso lobuxoki (32%) zikwabalulekile kwiingxaki zezithuthi ezingezizo ezabantu kubapapashi nakubathengisi.
Ukucofa kunye nokubonisa ubuqhetseba zezona zinto zixhalabisayo kubo bobabini abapapashi (i-86%) kunye nabathengisi (100%) xa kufikwa kwimiba yezithuthi zewebhu.
Ingxelo inobunzulu obumangalisayo kwaye ihamba ngabapapashi kunye nabathengisi ngendlela yokucofa ubuqhetseba kunye neendlela zokunciphisa umngcipheko, kubandakanya:
ukwenza -Gxila kancinci kumanani ekrwada nangakumbi kwizenzo ezibonakalayo. Faka imetriki yokusebenza ekhuthazayo kwiarhente yakho yokuqinisekisa iziphumo zeshishini ezisemgangathweni.
Ungazihoyi izimvo -Ukubonwa kufakwa ngokulula zi-bots kunye nolunye uhlobo lwabantu.
uphawu Uhlahlo-lwabiwo mali lomgangatho, hayi ubuninzi. Yahlula imali kwiindawo ezinomsila omde kutshintshiselwano ngeentengiso, apho ubuqhetseba buxhaphake kakhulu kwaye uthenge uluhlu lweempahla kwiindawo eziphambili, zepremiyamu.
Ukufuna ukungafihli nto -Ukuba iarhente yakho okanye abathengisi bezinto zentengiso abanakho ukukubonisa ukuba yeyiphi na intengiso nganye
umbono uhanjisiwe, ungazisebenzisi.
Khuphela isiKhokelo soMshicileli sedijithali sokuMlinganisa kunye nokuNciphisa iTra Traffic
tags: ubuqhetseba bentengisoUmbutho waseMelika weeArhente zeNtengisoANAUmbutho wabathengisi beLizwecofa ubuqhetsebaDistil NetworksIABIziko leNtengiso elisebenzayoukugcwala kwabantuingozitagiqela elinoxanduva lokuphendula
Oktobha 29, 2015 ngo-7: 25 PM
Sawubona uDouglas- inqaku ligubungela isohlwayo sokuqhafaza, kodwa asiboneleli sisisombululo sokwenyani, njengoko ubuqhetseba bobuqhophololo bungasoloko busenziwa kutrafikhi ye-bot. Umbono uya kuba kukuqaphela kakhulu useto olunxulumene nokujoliswa kwe-geo (njengaleyo iphantsi + kweenketho eziphambili). Kwakhona, usebenzisa isoftware ezinikeleyo, njenge http://www.xionagrup.ro ingayimbono elungileyo, okanye usebenzise iiplagi zelog ukubona ukuba zeziphi ii-IPs okanye iiklasi ezinqakraza kwiintengiso zakho.